नवरात्र प्रारम्भ र दसैंको महत्व - Pradesh Today
Homeफिचरनवरात्र प्रारम्भ र दसैंको महत्व
नेपालीमा एउटा उखान छ । ‘आयो दसैँ ढोल बजाई गयो दसैँ ऋण बोकाई !’ परम्परागत मनाउँदै आएको दसैँ पर्व यो बर्ष पनि नजिक आएको छ । दसैँको लागि आवश्यक सरसामान किनमेल गर्नेहरुको बजारमा भिड देखिन थालेको छ ।
छिमेकी मुलुक चीन र भारतबाट भित्रिने खसी, बोका, हाँस, कुखुरा एवं राँगोको मूल्य आकाशिएको छ । कमाइ गर्न देश, विदेश गएका युवायुवतीहरु दसैँ पर्वको लागि भनेर घर फर्किने क्रम बढ्दै छ ।
कतिपय घर परिवारले गएको सालका दसैँको ऋण तिर्न नसकेर घर खेत बेच्ने तर्खरमा लागेका छन् । यस्तो अवस्थामा आएको यो सालको दसैँ पर्व मनाउन हामी सबै बाध्य छौ ।
दसैँ पर्व हाम्रो संस्कृति हो । यसलाई तडकभडक साथ मनाउनुभन्दा पनि यसको संस्कृतिको बारेमा हामीलाई थाहा हुन जरुरी छ । हाम्रो परम्परा र संस्कृतिलाई बचाउनु पर्दछ तर यसलाई पर्वको रुपमा मनाउँदा आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई ख्याल गर्न सकेनौँ भने यसले हामीलाई दसैँ नभए र दशाको रुपमा परिणत गरिदिन्छ । आश्विन शुक्लपक्ष प्रतिपदाका दिनलाई घटस्थापना भनिन्छ ।
यसै दिनदेखि नवरात्री आरम्भ हुन्छ । यसै दिन जमरा राखिन्छ र घट कलशको स्थापना गरी देवीदेवताको आह्वान गरिन्छ । नवरात्री आरम्भ दिन बिहानीमै आत्मशुद्धिपश्चात् नदी, खोला, बगर या आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा गई चोखो बालुवा या पञ्चमाटो ल्याई दसैँ घर या पूजाकोठामा राखी त्यस ठाउँमा जमरा उमार्न जौ छरिन्छ ।
जौको आकुरा मात्र जमरा हो । भाषा बोल्ने क्रममा यमङकुर–जवङकुर–जम्कुर–जवर हुँदै जमरा भएको हो । भाषा परिस्कृत हुँदै जमरा शब्द बनेको हो । त्यसैले जमराको महत्व भाषीक रूपले पनि पौराणिक मानिन्छ ।
जौलाई वैदिक यज्ञको लागि अत्यावश्यक वस्तुको रुपमा मानिन्छ । माता भगवतीलाई मनपर्ने वनस्पतीमा जमरा पनि एक भएकोले भगवतीलाई खुसी पार्नको लागि जमरा उमार्ने गरिएको हो ।
त्यसैस्थान नजिकै माटोको विशुद्ध जलपूर्ण घडा (कलश)को वरिपरि नौवटा देवीको स्वरूपको प्रतिमूर्ति मानी गाईको गोबरले नौवटा देवीको वेदी बनाई लेपन गरिन्छ र घडाको वरिपरि जौ पनि छरिन्छ । अनि जलपूर्ण कलशमा पञ्चपल्लवको पात चढाइ अनन्त शक्ति स्वरुपकी महाकाली महालक्ष्मी र महासरस्वतीको पूजाआजा गरिन्छ ।
हाम्रो धर्म, संस्कृति अनुसार घट कलशमै सम्पूर्ण देवीदेवता सप्तसागर, सप्तद्वीप, सम्पूर्ण नदी एवं तीर्थहरु निहीत छन् भन्ने कुरामा विश्वास गरिन्छ । जुनकुरा कलिकापुराण भन्ने ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त घटकलश अष्ट मङ्गलका शुभ चिन्हहरुद्वारा समाहित गरिएको पाइन्छ । त्यसैदिन अर्थात् घटस्थापनाको दिनबाट घटकलश स्थापना गरी त्यसमै सम्पूर्ण देवीदेवता, तीर्थ, पावनतम नदीनाला, सप्तसागर, सप्तद्वीप आदि सबैलाई समाहित गरी दसैँ पूजाको थालनी गर्ने हाम्रो संस्कृति रहेको छ । यसै दिनदेखि नवमीसम्म प्रत्येक नेपालीहरूका घर–घरमा र देवीका मन्दिरहरूमा भगवती दुर्गाको पूजा,
आराधना र प्रार्थना गरिन्छ र शङ्ख, डमरू घण्टी आदि बजाइ दुर्गासप्तशती चण्डी, स्त्रोत्ररत्नावली, कालिकास्तोत्र, दुर्गाकवच, श्रीमद्देवीभागवत आदि पाठ पनि पढिन्छ । पूजा गरिसकिएपछि प्रत्येक दिन बली चाहिँ अनिवार्य दिनुपर्ने कुरा शास्त्रीय विधानमा उल्लेख गरिएको छ ।
बली शब्दको अर्थ हो अर्पण गर्नु अथवा चढाउनु वा उपहार दिनु । राँगो रूपी–क्रोध, भेडारूपी–मोह, बोकारूपी–कामवासना अर्थात् काम, क्रोध र वासनालाई अर्पण गर्नु, चढाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो शास्त्रको भाव हो । तर हामीहरूले बलि भनेपछि पशुहरुलाई काटेर बली दिने गरिन्छ । यसको बारेमा दसैँ पर्व मनाउनेहरुले सोच्न जरुरी छ ।
दसैँलाई बडादसैँ, दशहरा, विजयादशमी आदि नामले प्रचलित छ । यो नेपालीहरुको प्रमुख पर्व पनि हो । शास्त्रमा उल्लेख भए अनुसार भगवान रामले यसै दिन रावणको वध गरेका थिए ।
यसलाई असत्यमाथि सत्यको विजयको रूपमा हिन्दुहरुले विजयादशमीको पर्व मनाउने प्रचलन रहदै आएको छ । प्राचीन कालमा राजाहरू यसदिन विजयको प्रार्थना गरेर रणयात्राको लागि प्रस्थान गर्दथे भन्ने भनाइ रहेको छ ।
यसदिन ठाउँ–ठाउँमा मेलाहरु लाग्ने गर्दछ । अहिले पनि भारतमा रामलीलाको आयोजना हुन्छ । रावणको विशाल पुत्ला बनाएर जलाइन्छ । विजयादशमी भगवान रामको विजयको रूपमा मनाइने पर्व हो । दसैँ पर्वले दश प्रकारका पापहरू काम, क्रोध, लोभ, मोह मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसाको अन्त्य गर्नु पनि हो ।
असत्यमाथि सत्यको विजयका रूपमा मनाउन सुरु गरिएको दसैँ केही बर्षयता आफ्नो आर्थिक हैसियत बिर्सेर अरू घोडा चढे भनेर आफू धुरी चढ्ने प्रवृत्तिले गर्दा उल्लास र उमङ्गको चाड हुन सकेको छैन । जसले गर्दा दसैँ दशा भएर आउने गरेको छ ।
तसर्थ यसलाई एउटा साँस्कृतिक महत्वको चाडका रूपमा स्वीकार गरी दसैँको गरिमा वृद्धि हुनेगरी विशुद्ध मनोरञ्जनात्मक रुपमा ‘घाँटी हेरी हाड निल्नु’ भन्ने उखानलाई हृदयंगम गरी मनाउन सकियोस् अनि मात्रै दसैँ साच्चिकै दसैँ बन्न सक्छ ।
अहिले खाद्य, लत्ता कपडा, मासु आदि वस्तुहरूमा छाएको महङ्गी त्यसमाथि मिसावटयुक्त पदार्थ उपभोग गर्न बाध्य नेपालीहरूले अभावका बाबजुद पनि दसैँलाई आफ्नो हैसियत अनुसार मनाउनेतर्फ सबैले सोच्नु पर्दछ ।
आफन्तबाट टाढा–टाढा रहेका परिवारका सदस्यहरू पनि यो पर्वमा आफ्नो जन्मथलो र आफन्त भेट्ने तथा मान्यजनबाट टीका र जमराको साथ आशीर्वाद लिने परम्परा रहेको यो पर्वले ऐतिहासिक महत्व बोकेको छ ।
त्यसैले आर्थिक मन्दीले सबलाई सताइरहेको अवस्थामा आएको विजयादशमीलाई ऋण सापट गरेरै भएपनि धुमधामका साथ मनाउने तयारीमा आम नेपालीहरु जुटिरहेको अवस्था छ । विगत बर्षको तुलनामा झण्डै ५० प्रतिशत बृद्धि भएको महंगीको मारमा मनाउन लागिएको यो बर्षको दसैँले झन सबैलाई कष्टकर बनाउन थालेको छ ।
टस्थापनादेखि सुरू हुने यो पर्व विभिन्न शक्तिपीठहरुमा पूजाआजा र विशेषगरी नवदुर्गाको पूजा आराधना गरेर मनाउने हाम्रो प्रचलन छ ।
विजयादशमी पर्वको घटस्थापना, अष्टमी, नवमी हुँदै दशमीको दिन नजिकिदै छ ।
हाम्रा हरेक संस्कृति र पर्वहरू आर्थिक पक्षमा जोडिएको हुन्छ । आर्थिक हैसियत भएका वर्ग र विपन्न वर्गसमेत हाम्रै समाजमा रहेका छौँ । खर्च गरेर तडकभडक गरेर पर्व मनाउने र नसक्ने वर्गले पनि ऋणधन जुटाएर यस्ता साँस्कृतिक पर्वहरु मनाउँदा एउटा वर्ग जहिले पनि समाजमा ऋणको भारी बोक्नुपर्ने अवस्थामा रहेको हुन्छ ।
अबका दिनहरूमा देखासिकी र आडम्बरयुक्त दसैँ मनाउने मानसिकतालाई हामीले परिवर्तन गर्न जान्नुपर्दछ । अब पनि यस्ता खर्चिला पर्वहरूलाई परिवर्तन गर्र्न सकिएन भने समाजमा रहने विपन्न वर्गका मानिसहरूको अवस्था झनै दयनीय हुँदै जान्छ ।
विजयादशमीको सधैजसो शुभकामना लिने र दिनेक्रम बढ्दो छ । लाखांै पशुपंक्षीहरूलाई बली दिइदै छ । दसैँ विजय र आनन्दको उत्सव हो ।
असत्यमाथि सत्यको विजय दानवीय स्वभावमाथि मानवीय स्वभावको विजय, कु–शासनमाथि सु–शासनको विजय, अन्यायमाथि न्यायको विजय, हिंसामाथि अहिंसाको विजय, असुरी शक्तिमाथि दैवीय शक्तिको विजय नै विजयादशमी मनाउनुको मुख्य उद्देश्य हो । आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि दशमीसम्म दश दिन पूजापाठ, वर्त, उत्सव आदि गरेर मनाइने चाड भएकाले यसलाई दसैँ पनि भनिएको हो ।
घटस्थापनादेखि नै हिन्दूहरुले विभिन्न शक्तिपीठहरूमा दुर्गा सप्त शनि, चण्डी र भगवतीको स्त्रोत पाठ गरी विशेषगरी दुर्गा भवानीको आराधना गरिन्छ ।
परम्परागत दसैँ पर्वमा खड्ग यात्रा र पूजाको प्रचलन भएकाले यो पर्व नेपालमा तन्त्र यानको प्रादूर्भाव भएदेखि नै भएको हो भन्ने तर्क एकथरी विद्वानहरूको छ ।
तर, इतिहासले भने राजा हरिसिंह देवले नेपाल सम्वत ४४४ अर्थात् आजभन्दा ६८९ बर्ष पहिले तुलाजा भवानीसमेत लिएर नेपाल प्रवेश गरी उपत्यकामा राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा दसैँको पर्व सुरू भएको भन्ने पनि छ ।
देवी पुरान धर्मग्रन्थमा उल्लेख भए अनुसार सत्ययुगमा देवासुर सग्राम भएदेखि नै दसैँ पर्व मनाउन थालिएको कुरा धार्मिक विद्वानहरु बताउँछन् । चाहे जे जसरी पर्वको सुरुवात भएपनि परम्परागत मनाउँदै आएको दसैँ पर्व आज पनि हिन्दु समाजमा उत्तिकै लोकप्रिय चाडका रूपमा मनाउँदै आइएको छ ।
असत्यमाथि सत्यको विजय उत्सव मानि सुरू भएको दसैँ पर्व पछिल्ला दिनमा देवीलाई बली दिनुपर्दछ भन्ने मान्यता लिई दसैँ पर्वमा लाखाँै पशुपंक्षीहरूलाई शक्तिपीठ मानिएका देवीदेवताको मन्दिर र दसैँ घरमा समेत बली दिने गरिन्छ ।
धार्मिक सस्कृतिसँग जोडेर देवीलाई बली दिने प्रचलन बढ्न थालेको छ । पासविकताको ताण्डव नृत्य मञ्चन हुने बली प्रथाको समाजलाई अन्धविश्वासमा दोहो¥याइएको छ । मुगु जिल्लाको गमगडीमा दसैँको अवसरमा दिइने बलीमा प्रथाले अचम्मको दृश्य देख्न सकिन्छ ।
बलीका लागि ल्याइएका बोका मन्दिर परिसरमा पुगेपछि खुर्सानीलाई पिधेर बनाइएको लेप बोकाको संवेदनशील स्थानलगायत शरीरको सबै भागमा लगाइन्छ । खुर्सानीको पिरोको जलनले बोका उफ्रिन थाल्दछ, बोका कराउँछ, चित्कार छोड्छ ।
तर, त्यहाँ कसले सुन्ने ? त्यसरी कराएर छटपटाएको बोकालाई मन्दिरको परिसरका युवाहरुले पेटमा आफ्नो दातले टोक्न थाल्दछन् । कसको टोकाइबाट बोकाको भुडी छेड्न सकिन्छ भन्ने होडबाजी चल्छ मन्दिरमा । जसले बोकाको भुडी छेड्छ अनि वीरताको कर्तलध्वनी बज्न थाल्छ त्यहाँ ।
नवरात्र प्रारम्भदेखि नै बली दिनेहरुले पशुपंक्षीहरूको बली देवीदेवताको नाममा अन्धविश्वासका शैलीबाट पशुको बली दिनेका विरुद्ध अहिंसावादीहरुले विरोध जनाउन थालेका छन् ।
देवीदेवताका लागि सबै जीव समान हुने हुँदा, पशुबली दिएर देवीदेवता खुसी नहुने कुरा अहिंसावादीहरूले बताउँदै वली प्रथा नै रोक्नुपर्ने धारणा राख्न लागेका छन् ।
विश्वकै सबैभन्दा धेरै बली चढाइने भारतको कोलकातास्थित मन्दिरमा अंग्रेजहरुको शासनकाल सन् १९४७ मा बली दिने प्रथा रोकिएपछि अहिले एशियाकै सबैभन्दा बली चढाइने मन्दिर बारा जिल्लाको गढीमाईको मन्दिर भएको छ ।
गढीमाईको मन्दिरमा बोका, राँगा, भेडा, सुगुर, कुखुरा मात्र होइन मुसाको समेत बली दिने परम्परा छ । तर यतिखेर सर्वोच्च अदालतले गढीमाई मेलाका नाममा पशुमाथि हुने क्रुर व्यवहार रोक्न आदेश दिएको छ ।
बली प्रथाको बारेमा अध्ययन गर्दा नेपालमा भुरे टाकुरे शासकहरूकै पालामा लडाइ लड्दा होस् वा विजयप्राप्त गर्दा होस् देवीकै शत्तिले जीत भएको मानी, कोट, मौला, हतियार र देवीको मूर्तिमा बली चढाउने परम्पराको थालनी भएको थियो ।
शाह वंशको इतिहास हेर्ने हो भने लमजुङका घले राजालाई अपदस्त गराएर स्याङ्जा नुवाकोटका राजा कुलमण्डनसँग उनको छोरा यशोब्रह्म शाहलाई लमजुङको राजा बनाउदा वि.सं. १५५० मा कालिकाको मन्दिर बनाई राँगा, बोका, भेडा, कुखुरा, हाँस, परेवा गरी १९ वटा पशुपंक्षीको बली चढाएर राजाले देवीसँग शक्ति मागेको इतिहास छ ।
शाह राजाहरूले पछिका दिनमा पनि ठाउँ–ठाउँमा देवीदेवताका मन्दिर बनाउन लगाएर राज्यकै तर्फबाट पूजाआजा चलाउँदै आएका थिए । अहिले समाजमा अहिंसावादीहरूले पशुबलीको विरोध गर्दै आए पनि राज्यले समेत यो बली प्रथालाई रोक्नेतर्फ लागेको छैन । दसैँ पर्वमा बली प्रथा रोक्नको सट्टा झन मौलाउँदै गएको कुरा बली प्रथा बिरोधीहरू बताउँछन् ।
धर्मको नाममा बली दिनेहरूलाई चेतना दिनेहरूको संख्या र संघसंस्था बढ्न थालेको छ । हालसम्म औपचारिकरूपले पशुबली निषेध अभियान नेपाल, कृष्ण प्रणामी युवा परिषद्, एनिमल वेलफेयर सोसाईटीलगायतका पशु अधिकारकर्मीका संस्था बलीको विरोधमा लागेका छन् ।
हामी नेपाली संस्कृतिका धनी छौँ । सानो देशमा १२५ जातिहरु रहेका छौँ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हिन्दुधर्म मान्नेहरुको संख्या ८१.३४% रहेको छ भने राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मानिने दसैँ पर्वलाई हिन्दुबाहेक बौद्ध, किराँत, इस्लाम, क्रिश्चियन र अन्य धर्ममा आस्थावान् भएका समुदायहरूले पनि दसैँ पर्वलाई महत्व दिने गरेको पाइन्छ । हाम्रा हरेक संस्कृति र पर्वहरू आर्थिक पक्षमा जोडिएको हुन्छ ।
आर्थिक हैसियत भएका वर्ग र विपन्न वर्गसमेत हाम्रै समाजमा रहेका छौँ । खर्च गरेर तडकभडक गरेर पर्व मनाउने र नसक्ने वर्गले पनि ऋणधन जुटाएर यस्ता साँस्कृतिक पर्वहरु मनाउँदा एउटा वर्ग जहिले पनि समाजमा ऋणको भारी बोक्नुपर्ने अवस्थामा रहेको हुन्छ ।